I-Robaxin vs.Flexeril: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Inkampani Umphakathi, Ukuphila Kahle Izindaba, Wellness Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani, The Checkout Cindezela Imfundo Yezempilo, Izindaba Ukuphuma Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Robaxin vs.Flexeril: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Robaxin vs.Flexeril: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
ungathenga i-pantoprazole ngaphezu kwekhawunta
Igama lomkhiqizo iFlexeril limisiwe; noma kunjalo, isatholakala njenge-generic-cyclobenzaprine-futhi njengamagama ezimpawu u-Amrix noFexmid.
Izithambisi zokuphumula kwemisipha ngeminye yemithi ejwayeleke ukwelashwa yokwelapha ubuhlungu beqolo nezinye izingqinamba noma ama-sprains. I-Robaxin (methocarbamol) ne-Flexeril (i-cyclobenzaprine) yizibonelo zokuphumula kwemisipha (i-SMRs) umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angakunikeza uma uzwa ubuhlungu bemisipha.
Kokubili iRobaxin neFlexeril zisebenza ngezindlela ezifanayo ngokusebenza ohlelweni lwezinzwa oluphakathi (CNS). Okunye okuhlukaniswa njengama-antispasmodic agents, iRobaxin neFlexeril kuyasebenza ekwelapheni okunamandla, okubuhlungu izimo zemisipha lokho kubangela ukungakhululeki nokuqaqamba kwemisipha. Banemiphumela engemihle efana nokulala nesizungu.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweRobaxin neFlexeril?
I-Robaxin, eyaziwa ngegama layo elejwayelekile elithi methocarbamol, yakhishwa emakethe ngawo-1960. Ngenkathi indlela yayo ngqo yokusebenza ingaziwa, iRobaxin (funda ngeRobaxin) kukholakala ukuthi iqeda ukungakhululeki ngemiphumela yayo yokuthambisa. Akuthinti ngqo ukucindezela kwemisipha.
I-Robaxin iyatholakala njengegama lomkhiqizo noma umuthi ojwayelekile. Kuza njengomjovo kanye ne-500 mg noma i-750 mg tablet yomlomo. Labo abanikezwe amaphilisi e-Robaxin badinga ukuthatha amaphilisi amabili noma amathathu kane ngosuku , ekuqaleni. Ngemuva kwalokho kunconywa iphilisi elilodwa noma amabili kathathu noma kane ngosuku noma ngaphezulu.
I-Flexeril yaqale yamukelwa yi-FDA ngawo-1970. Isebenza kakhulu esiqwini sobuchopho nasentanjeni yomgogodla ku-CNS, esiza ukunciphisa ukusebenza kwezimoto. I-Flexeril nayo ifana nokwakheka kwe-tricyclic imishanguzo futhi inemiphumela engemihle efana nomlomo owomile nokuthambisa.
I-Flexeril yaziwa kakhulu ngegama layo elijwayelekile elithi cyclobenzaprine. Igama lomkhiqizo iFlexeril limisiwe; noma kunjalo, i-cyclobenzaprine iyatholakala ngamanye amagama womkhiqizo amabili: i-Amrix (ukukhululwa okunwetshiwe) ne-Fexmid (ukukhishwa ngokushesha). Ithebhulethi ekhishwa enwetshiwe ingathathwa kanye ngosuku.
OKUSHIWO: Funda ngeCyclobenzaprine | Funda ngeFexmid
Umehluko omkhulu phakathi kweRobaxin neFlexeril
Isigaba sezidakamizwa Ukuphumula kwemisipha
Umenzeli we-Antispasmodic Ukuphumula kwemisipha
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Uhlobo lomkhiqizo nolwejwayelekile luyatholakala Uhlobo lomkhiqizo nolwejwayelekile luyatholakala
Igama lomkhiqizo uFlexeril linqanyuliwe e-US. Amanye amagama womkhiqizo afaka i-Amrix neFexmid.
Ngubani igama elijwayelekile? I-Methocarbamol ICyclobenzaprine
Ukujova Ithebhulethi yomlomo
I-capsule yomlomo, ukukhishwa okude
Uyini umthamo ojwayelekile? Isilinganiso sokuqala: 1500 mg izikhathi 4 nsuku zonke
Isilinganiso sesondlo: ama-1000 mg izikhathi ezi-4 nsuku zonke, ama-1500 mg ama-3 amahlandla nsuku zonke, noma ama-750 mg njalo ngamahora amane Amaphilisi akhishwa ngokushesha: 5 mg kathathu nsuku zonke. Umthamo ungakhuphukela ku-10 mg izikhathi ezi-3 nsuku zonke.
Amaphilisi akhululiwe: 15 mg kanye ngosuku. Umthamo ungakhuphukela ku-30 ​​mg kanye ngosuku.
Yelashwa isikhathi esingakanani? Ukwelashwa kwesikhashana noma kwesikhathi eside njengoba kuqondiswe udokotela wakho Angadluli emavikini amabili kuya kwamathathu
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala kanye nabantu abadala abaneminyaka yobudala eyi-16 noma ngaphezulu Abantu abadala kanye nabantu abadala abaneminyaka yobudala eyi-15 noma ngaphezulu
Ufuna intengo ehamba phambili kuRobaxin?
Bhalisela izexwayiso zentengo yeRobaxin bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Izimo eziphathwe yiRobaxin neFlexeril
I-Robaxin ne-Flexeril zivunyelwe i-FDA ukwelapha ukungakhululeki noma ukuphazamiseka kwemisipha okuvela ezimweni ezibucayi zemisipha kanye ngqi .
I-Robaxin noma i-Flexeril ivame ukunikezwa ukwelapha ubuhlungu be-musculoskeletal njengobuhlungu bentamo. Zombili lezi zidakamizwa nazo zivame ukusetshenziselwa ukwelapha izinhlungu ezisezingeni eliphansi, inkinga ejwayelekile kubantu abadala e-US. Kuya ku Ama-80% abantu abadala bezwa ubuhlungu obuphansi emuva kwesinye isikhathi ezimpilweni zabo.
I-Flexeril nayo ifundelwe ukwelapha i-fibromyalgia, okuyisifo esingelapheki esivezwa ubuhlungu bemisipha emzimbeni wonke. Labo abane-fibromyalgia bangabhekana nobuhlungu bemisipha obusakazekile kanye nezinkinga zokulala, ukukhathala nemizwelo. Ngokuya nge- ukuhlaziywa kwe-meta kwezivivinyo ezinhlanu zemitholampilo, i-cyclobenzaprine yatholakala ithuthukisa ukulala nobuhlungu ezigulini ezine-fibromyalgia esikhathini esingangesonto lama-24.
Isimo I-Robaxin Flexeril
Ukudumba kwemisipha Yebo Yebo
Izimo zemisipha Yebo Yebo
UTetanusi Yebo Yebo
I-Fibromyalgia Akunjalo Ngaphandle kwelebula
Ngabe iRobaxin noma iFlexeril isebenza kangcono?
I-Robaxin ne-Flexeril yizindlela zokwelapha eziphumelelayo zokwelapha ubuhlungu be-musculoskeletal kanye ne-muscle spasms. Isidakamizwa esisebenza kangcono yiso esisebenza kangcono ecaleni lakho elithile.
I-Flexeril ingesinye sezihlaziyi zemisipha ezifundwe kakhulu; ngakho-ke, inobufakazi obusekela kakhulu ukusebenza kwayo. Phakathi ku ukubuyekeza okuhlelekile , kwatholakala ukuthi, ngokuvamile, izidambisi zemisipha ziyaqhathaniswa nokusebenza. Lokhu kubuyekezwa kufaka ezinye izidambisi zemisipha ezifana ne-metaxalone, i-baclofen, i-tizanidine, i-orphenadrine, ne-chlorzoxazone.
Ekulingweni kwekhanda phakathi kwekhanda phakathi kwe-methocarbamol ne-cyclobenzaprine, kwakukhona awukho umehluko ophawulekayo ekuqaqeni kwemisipha noma kwesisa. Kodwa-ke, iziguli zithole ukuthuthuka okungatheni kobuhlungu bendawo nge-cyclobenzaprine (48% vs. 40%). I-cyclobenzaprine nayo yatholakala ikhiqiza ukudangala okungaphezulu noma ukozela (58% vs. 10%).
ICyclobenzaprine ifaniswe neValium (diazepam) neSoma (carisoprodol) in izivivinyo zokwelashwa . I-Cyclobenzaprine yayisebenza ngendlela efanayo kulezi zidakamizwa ekwelapheni ubuhlungu obubuhlungu beqolo.
Xhumana nomhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo ukuze uthole iseluleko sezokwelapha ukuze ukutholele izindlela ezingcono zokwelashwa. Ngemuva kokuhlolwa okuphelele okuvela kudokotela, umuthi owodwa ungakhethwa ngokuya ngomlando wakho jikelele wezokwelapha.
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathaniswa kweRobaxin vs.Flexeril
Amaphilisi ejenerikhi Robaxin avame ukumbozwa ngabakwaMedicare nezinhlelo zomshuwalense. Amathebulethi eRobaxin angathengwa ngezindleko zokuthengisa ezingama- $ 31. Ikhadi lesaphulelo le-SingleCare lingehlisa le ntengo liye ku- $ 8 kuma-pharmacy abambe iqhaza.
ICyclobenzaprine inezindleko eziphakeme zokuthengisa ezingama- $ 42.99, uma kuqhathaniswa neRobaxin. Amaphilisi ejwayelekile e-cyclobenzaprine avame ukumbozwa yi-Medicare nezinhlelo zomshuwalense. Uma ungenawo umshwalense, ungasebenzisa ikhadi lesaphulelo le-SingleCare ukunciphisa le ndleko ibe ngaphansi kwama- $ 8 kuya ngekhemisi lakho. Noma ngabe unomshuwalense, kungaba umqondo omuhle ukuthola ukuthi ungathola inani elishibhile kuma-relaxant muscle.
Umthamo ojwayelekile Amaphilisi angama-500 mg (inani lama-30) Amaphilisi ayi-10 mg (inani lama-30)
I-Medicare copay ejwayelekile $ 0– $ 47 $ 1– $ 35
Izindleko ze-SingleCare $ 7- $ 17 $ 7- $ 12
Imiphumela emibi ejwayelekile yeRobaxin vs. Flexeril
Imiphumela emibi kakhulu yeRobaxin neFlexeril ukozela, isiyezi kanye nekhanda. I-Flexeril ingahle ihlotshaniswe nokozela okuningi uma kuqhathaniswa neRobaxin. Ngenxa yezakhiwo zayo ze-anticholinergic, i-Flexeril nayo ingadala umlomo owomile .
Kokubili iRobaxin neFlexeril kungadala ukukhathala noma isicanucanu esithile.
Imiphumela emibi kakhulu ifaka phakathi ukusabela kwe-hypersensitivity. Lokhu kusabela kokungezwani komzimba kungabonakala njengenkinga yokuphefumula, ukuqubuka okukhulu nokuvuvukala. Funa usizo lwezokwelapha ngokushesha uma uhlangabezana nale miphumela emibi.
Ukozela Yebo * akubikiwe Yebo 29%
Isiyezi Yebo * Yebo 1% –3%
Ubuhlungu bekhanda Yebo * Yebo 5%
Umlomo owomile Akunjalo - Yebo amashumi amabili nanye%
Ukukhathala Yebo * Yebo 6%
Isicanucanu Yebo * Yebo 1% –3%
Lokhu kungenzeka kungabi uhlu oluphelele. Xhumana nodokotela wakho noma usokhemisi ngemiphumela engemihle engaba khona.
Umthombo: DailyMed ( I-Robaxin ), IDailyMed ( Flexeril )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa zeRobaxin vs. Flexeril
Njengoba iRobaxin neFlexeril babe nayo Imiphumela ecindezelayo ye-CNS , zingasebenzisana nezinye izidakamizwa ezinemiphumela efanayo. Izidakamizwa ezinemiphumela ecindezelayo ye-CNS zifaka ama-barbiturates nama-benzodiazepines.
Izidakamizwa ze-Serotonergic kufaka phakathi i-tricyclic antidepressants, i-serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ekhethiwe, kanye ne-serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), nayo ingadala imiphumela ye-CNS. Ukuthatha izinto zokuphumuza imisipha ngalezi zidakamizwa kungadala imiphumela emibi efana nokuwozela nesiyezi.
I-Robaxin inganciphisa ukusebenza kwe-pyridostigmine bromide, umuthi osetshenziselwa ukwelashwa myasthenia gravis .
Ukuhlanganiswa kwe-Flexeril kanye ne-monoamine oxidase inhibitor (MAOI) kungadala ukuhlangana kwezidakamizwa okusongela impilo. Lokhu kuhlangana kwezidakamizwa kungaholela isifo se-serotonin , Okungafaka phakathi izimpawu ezifana nomkhuhlane ophakeme ngendlela engajwayelekile, ukundindizela, ukujuluka okwandayo, isicanucanu nokuhlanza.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa I-Robaxin Flexeril
Isocarboxazid I-Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) Akunjalo Yebo
Isebitalbital Ama-barbiturates Yebo Yebo
I-Hydrocodone Ama-opioid Yebo Yebo
I-Alprazolam I-Benzodiazepines Yebo Yebo
Lokhu kungenzeka kungabi uhlu oluphelele lwako konke ukuhlangana kwezidakamizwa okungenzeka. Xhumana nodokotela ngayo yonke imithi okungenzeka uyayiphuza.
Izexwayiso zeRobaxin neFlexeril
Iziphumuli zemisipha kufanele zigwenywe noma ziqashwe ngaphambi kokusebenzisa imishini noma ukushayela imoto. Ukuphumula kwemisipha okufana neRobaxin noma iFlexeril kungadala isizungu noma ukozela futhi kuphazamise ukusebenza kwengqondo.
I-Methocarbamol ne-cyclobenzaprine azinconywa kubantu abadala asebekhulile. Yomibili le mithi ikhona UHLU LOBHERI , uhlu olwamukelwayo lwemithi olwenziwe yi-American Geriatrics Society. Ukuphumula kwemisipha okunemiphumela ecindezelayo ye-CNS kungakhuphula ubungozi besiyezi, ukuwa, nokulimala kanzima kubantu asebekhulile.
Ukuphumula kwemisipha akunconywa kwabesifazane abakhulelwe. Le mithi kufanele igcinwe ikude nezingane ezincane.
Ukuphumula kwemisipha kwesinye isikhathi ukuhlukunyezwa futhi kungadala ukuncika emzimbeni. Ukuyekiswa okungazelelwe kwale mithi ngemuva kokuyisebenzisa isikhathi eside kungadala izimpawu zokuhoxa. Le mithi kufanele isetshenziswe kuphela ngaphansi kweso lodokotela noma umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo.
Imibuzo ebuzwa njalo ngeRobaxin vs. Flexeril
I-Robaxin iyi-relaxant yemisipha evunyelwe yi-FDA ukwelapha ubuhlungu nokungakhululeki okuvela ezimweni zemisipha ezinjengama-sprains, ubuhlungu beqolo, nobuhlungu bentamo. Itholakala njengomuthi ojwayelekile obizwa nge-methocarbamol.
I-Flexeril yigama lomkhiqizo le-cyclobenzaprine, isiqabu semisipha esivamise ukwenziwa sokuqaqamba kwemisipha nezinye izimo zemisipha. I-cyclobenzaprine iyatholakala kumafomu akhishwa ngokushesha nangokunwetshwa okwandisiwe.
Ngabe iRobaxin neFlexeril ziyefana?
I-Robaxin neFlexeril zombili ukuphumula kwemisipha . Kodwa-ke, azisona isidakamizwa esifanayo. I-Robaxin iqukethe i-methocarbamol futhi ivame ukukhishwa izikhathi eziningi ngosuku. I-Flexeril iqukethe i-cyclobenzaprine futhi itholakala kwifomu ekhishwe isikhathi eside engathathwa kanye ngosuku.
Ngabe iRobaxin noma iFlexeril ingcono? / Yikuphi okungcono: I-Flexeril noma i-methocarbamol?
I-Robaxin ne-Flexeril ziyaqhathaniswa nokusebenza. Abanye abantu bangase bakhethe ukukhishwa okwandisiwe kwe-generic Flexeril ngomthamo wayo wansuku zonke. Kepha, iFlexeril nayo ingadala imiphumela emibi efana nokuwozela nomlomo owomile. Xoxa ngalezi zindlela zokwelashwa nodokotela ukuze akutholele umuthi ongcono kakhulu.
Ngingayisebenzisa iRobaxin noma iFlexeril ngenkathi ngikhulelwe?
Azikho izifundo ezanele zokukhombisa ukuthi iRobaxin noma iFlexeril iphephile noma iyingozi ngesikhathi sokukhulelwa . Le mithi kufanele ithathwe kuphela uma izinzuzo zayo zidlula izingozi. Ukuphumula kwemisipha kufanele kuthathwe kuphela ngokuholwa ngudokotela.
Ngingayisebenzisa iRobaxin noma iFlexeril ngotshwala?
Akunconyelwa ukuthi uphuze utshwala ngenkathi useRobaxin noma eFlexeril. Utshwala bungakwenza imiphumela emibi ye-muscle-relaxant njengokulala, isiyezi, noma ukulahlekelwa ukuhlangana.
Yimuphi umthambo wokuphumuza onamandla kakhulu?
Ngokusho kokubuyekezwa okuhlelekile, cishe konke iziduduzi zemisipha afaniswa nokusebenza. I-cyclobenzaprine ne-tizanidine ingahle ihlale kakhulu. Kodwa-ke, i-cyclobenzaprine ingelinye lama-relaxer emisipha afundwe kakhulu anobufakazi obuqinile bokusebenza kwayo.
Ungayiphatha kanjani i-asthma yakho ngesikhathi sokukhulelwa
I-leukemia vs. lymphoma: Qhathanisa izimbangela, izimpawu, ukwelashwa, nokuningi
kuze kube nini uhlelo b alusebenzi
udinga umshuwalense wokunakekelwa okuphuthumayo
ngiluthola kanjani uhlobo lwami lwegazi
umuthi wamakhaza ajwayelekile namakhala agijimayo
liyini izinga elijwayelekile le-a1c?
izinga lokushisa lomzimba elijwayelekile ku-celsius kubantu abadala